Xog: Laba qodob oo sababay inay dowladda Kenya joojiso duulimaadyada Soomaaliya -... - Wararka Maanta
Muqdisho (Wararka Maanta) – Dowladda Kenya ayaa shalay soo saartay go’aan ay ku joojineyso duulimaadyada ka yimaada Soomaaliya, marka laga reebo duulimaadyada caafimaadka iyo kuwa gargaarka bani’aadannimo.
1- In dowladda Soomaaliya aysan fasaxin qaadka ka yimaada dalka Kenya oo sanadkii malaayin lacag ay ka hesho dowladda Kenya. Wararku waxay sheegayaan in nin la dhashay Madaxweyne Farmaajo oo lagu magacaabo Xasan Farmaajo iyo Cali Yare Cali ay dalka keenaan qaadka Itoobiya dartoodna loo joojiyay kan Kenya.
Wararka Maanta : Xog: Farmaajo oo eedda muddo kororsiga dusha u saaray guddoomiye Mursal - WararkaMaanta
Qaadka Kenya ayaa markii hore u xirnaa ganacsato Soomaali ah, hase yeeshee maadaama aan laga wareejin karin la joojiyey gebigiisa si mashruuc kale oo dhanka Itoobiya ah loogu furo Xasan Farmaajo iyo Cali Yare, kaasi oo ay malaayiin dollar hadda ka sameeyaan.
Wararka Maanta : Sacuudiga oo shaacisay tirada sanadkaan xajinaysa iyo sharuudaha laga rabo
Wararka Maanta : Maxay yihiin ciidamada ay QATAR u tababareyso DF?
Wararka Maanta : Siyaasiyiinta beesha Gedo oo ka horyimid qodobada Gedo ee heshiiska...